ကြီးမားသော veranda နှင့်အတူကျစ်လစ်သိပ်သည်းနွေရာသီအိမ် အနုပညာအာရုံ - အိမ်နှင့်ဥယျာဉ်အတွက်စိတ်ကူးများ
ကြီးမားသော veranda ပါသောကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောနွေရာသီအိမ်တစ်လုံးအတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောဤစီမံကိန်းသည်အိမ်၏ကျန်အိမ်များထက်အမှန်တကယ်ပိုကြီးသည့်ပွင့်လင်းသောမိုးလုံလေလုံofရိယာ၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုအလေးပေးသည်။ ယင်းသည်ပူနွေးသောလများအတွင်းအနားယူလိုသောဆန္ဒဖြစ်ပြီး၊ အခန်းများအတွင်းရှိလေထုကိုလုံးလုံးလျားလျားအနားယူလိုသောဆန္ဒသည်မတွန်းလှန်နိုင်သည့်အတွက်ထိုကဲ့သို့သောဗိသုကာဖန်တီးမှုကိုလှုံ့ဆော်ပေးခဲ့သည်။
အိမ်ကိုယ်နှိုက်က 60sq.m ထက်နည်းသည်။ ရေချိုးခန်းနှစ်ခန်းပါ ၀ င်သောအိပ်ခန်းနှစ်ခန်းရှိပြီး covered ည့်ခန်းကျယ် ၀ န်းပြီး covered ည့်ခန်းကျယ်သည်။ အဲဒီမှာပါ built မီးဖိုနောက်တစ်ခုကထိုင်ခုံနေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးနောက်ကွယ်မှာလူရှစ်ယောက်အတွက်စားပွဲကြီးတစ်ခုဖြစ်သည်။
မီးဖိုမှတိုက်ရိုက်မီးနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသောလှပသောထိန်းသိမ်းထားသောမြက်ခင်းများနှင့်ကြွယ်ဝသောအလင်းရောင်သည်ဤအဆောက်အအုံ၏အစိတ်အပိုင်းကိုဂိမ်းများ၊ ဖျော်ဖြေရေး၊ သူငယ်ချင်းများနှင့်တွေ့ဆုံရန်နှင့်အရသာရှိသောအစားအစာများအတွက်နေ့ဖြစ်စေ၊ ညနေခင်း၌ဖြစ်စေသည်။
၁၀၁ ဝင်ပေါက် - ၂.၃၂ မီတာ²၊ 101. အိပ်ခန်း - 2.32m²; 102 အိပ်ခန်း - ၉.၆၂ မီတာ;၊ ရေချိုးခန်း - ၅.၂၂ မီတာ;၊ 14.23. စင်္ကြံ - 103m²; ၁၀၆။ နေ့စဉ် ၂၁.၉၃ မီတာ၊ 9.62.Terrace - 104m²။
အိမ်၏စုစုပေါင်း--ရိယာ - ၅၈.၆၂ m58,62;
အိမ်၏စုစုပေါင်း(ရိယာ (ကျန်ကြွင်းသောနေရာနှင့်) - 134.68m²။
ရင်းမြစ် - eurohouse.ua
အိမ်ဗိသုကာ, မီးဖိုနှင့်အတူအပြင်ဘက်ထောင့်, အိမ်နှင့်ဥယျာဉ်, ဥယျာဉ်အတွက်စိတ်ကူးများ, အိမ်မှာစိတ်ကူးများ, ကျစ်လစ်သိပ်သည်းအိမ်, veranda နှင့်အတူအိမ်, နွေရာသီအိမ်, ကြီးမားတဲ့ veranda, ဖုံးလွှမ်းကျန်ကြွင်းသောအရပ်, သေးငယ်တဲ့အိမ်သူအိမ်သားများအတွက်စီမံကိန်း, အလုပ်လုပ်တဲ့ဖြန့်ဖြူး, အိမ်မှာစိတ်ကူးများ, အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်း, ပရိဘောဂ, အတွင်းပိုင်းစိတ်ကူးများ, ဒီဇိုင်းစိတ်ကူးများ, ခေတ်သစ်အိမ်, အလှဆင်အတွေးအခေါ်များ, အနုပညာစိတ်ကူးများ
blue ည့်ခန်းကိုအပြာဖြင့်အလှဆင်ရန်အတွက်အကြံဥာဏ်အချို့ရှိပါသည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်သိသည်အတိုင်း ...
ဆောင်း ဦး ရာသီစားပွဲအလှဆင်
လှပသောဆောင်း ဦး အလှဆင်မှုများနှင့်စားပွဲစီစဉ်ပေးခြင်း။ အရွက်များနှင့်ဆောင်းရာသီအသီးများပေါင်းစပ်အလှဆင် ...